विमल पाेखरेल काठमाडाैं, २८ माघ
ठूला राजनीतिक दलका धेरै नेताले भ्रष्टाचारमा स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका छन् । केही नेताहरू स्वर्ण पदकका दाबेदार भए पनि तिनीहरूको पदक तत्काललाई खोसिएको छ ।
पदक खोसिनेमा नेकपा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलसमेत छन् । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय गच्छदारले पनि स्वर्ण पदक जितेका छन् । अब उनी जेल गए भने उनले त्यो पदक घरको भित्तामा सजाउनेछन् ।
कांग्रेसका नेताहरू गोविन्दराज जोशी र जयप्रकाश गुप्ता भ्रष्टाचारमा स्वर्ण पदक प्राप्त गरेर अहिले अवकाशको जिन्दगी बिताइरहेका छन् । अर्बौंको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी बालुवाटार काण्डका तथ्यहरू केलाउँदा के देखिन्छ भने माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि गोविन्दराज जोशी र जयप्रकाश गुप्ताजस्तै अवकाशको जिन्दगी बिताउनुपर्ने व्यक्तिहरू हुन् ।
यद्यपि त्यसको फैसला अदालतले गर्ने हो । तर दुःखको कुरा के भयो भने अदालतमा परीक्षण गर्नै दिइएको छैन ।
नेपाली राजनीतिको मूल वृत्त भ्रष्टाचारको आहालमा तीव्र गतिले निरन्तर पौडिएको छ । भ्रष्टाचारले २/४ सय नेता र केही हजार कर्मचारीले स्वर्गसमान जिन्दगी जिउने र करोडौँ जनताले गरिबी, अशिक्षा, भोकमरीमै प्राण त्याग्नुपर्ने सयौँ पुस्तादेखिको बाध्यता समाजवादउन्मुख समाजमा पनि विद्यमान छ ।
विष्णु पौडेल मात्रै संलग्न छैनन्
समाचारमा आएका तथ्यहरूबाट बालुवाटार काण्डमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको संलग्नता प्रष्ट भइसकेको छ । उनले सरकारी फाइलमा कुनै हस्ताक्षर नगरे पनि आफ्नो नाममा जग्गा हात पार्ने दाउमा आधा बालुवाटारलाई माफियाको हातमा सुम्पिनका लागि शक्तिशाली नेताको हैसियतले काम गरे ।
जग्गा कारोबारी शोभाकान्त ढकाल तत्कालीन एमालेको समानुपातिक सांसदको उम्मेदवार बनाइनुले पनि तिनीहरूको संदीग्ध सम्बन्ध खुल्दै गएको छ ।
रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङबाट पौडेलको समूहले व्यक्तिगत वा तत्कालीन एमालेले समूहगत फाइदा कति लियो ? निश्चय पनि त्यो भविष्यमा नेकपाभित्र खोजीको विषय बन्नेछ ।
बुटवलमा घर भएका विष्णु पौडेललाई काठमाडौंमा घर किन चाहियो ? काठमाडौंमा घर भएका उनैलाई बालुवाटारमा जग्गा किन चाहियो ? यसको सिधा अर्थ के हो भने उनले भूमाफियाहरूसँग साँठगाँठ गरेर बालुवाटारको जग्गामाथि रजाइँ गर्ने राजनीतिक वातावरणको निर्माण गरे । अर्बौं रुपैयाँ पर्ने करिब सवा सय रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने आँट उच्च राजनीनिक योजना र संरक्षणविना सम्भावना हुँदैन थियो ।
बालुवाटार काण्डमा विष्णु पौडेल मात्रै संलग्न छैनन् । बाहिरबाट हेर्दा पौडेल प्रत्यक्ष संलग्न भएको जस्तो देखिए पनि शोभाकान्त ढकाल वा रामकुमार सुवेदीले नेकपाका धेरै नेताहरूलाई प्रभावमा पारेको वा फाइदा लिएको कुरा खुलासा भइसकेको छ ।
विष्णु पौडेलले बालुवाटारमै जग्गा प्राप्त गरे । तर अन्यत्र जग्गा प्राप्त गरेर बालुवाटारको बारेमा लविङ गरिरहेका अन्य नेता र तिनीहरूको समूह कता ब्यस्त छन्, त्यो अर्काे खोजीको विषय हो ।
माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, डम्बर श्रेष्ठलगायतका नेता मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नका लागि प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका छन् । अख्तियारबाट चोख्याइएका लीलामणि पौडेलसमेत यो काण्डमा मुछिएका छन् । त्यसैले यो काण्डका मुख्य नाइके विष्णु पौडेल मात्रै होइनन्, निर्णय प्रक्रियामा यसभन्दा कैयौँ धेरै संलग्न छन् । त्यो कुराको खुलासा बाबुराम भट्टराईले गरिसकेका छन् ।
नेकपामा जग्गा कारोबारको इतिहास
बालुवाटारको सरकारी जग्गा कब्जाको विषयले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वकै प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यति मात्रै होइन कि नेकपाको समग्र वर्गीय धरातललाई समेत प्रष्ट पार्छ ।
भूमिगतकालमै काठमाडौंमा किनिएको जग्गाका बारेमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको बीचमा विवाद उत्पन्न भएको समाचार केही वर्षपहिले बाहिरिएको थियो । त्यसले तत्कालीन एमालेभित्र खैलाबैला मच्चाएको थियो । समाचारअनुसार यो विवाद केन्द्रीय तहमै सामसुम पारेर मिलाइएको थियो ।
विष्णु पौडेल, मोदनाथ प्रश्रित, सीपी मैनाली, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल आदि सबैका घरजग्गा कुनै न कुनै रूपमा विवादको घेरामा छन् ।
केन्द्रीय नेतृत्वमा भएका सबैको काठमाडौंमा भव्य महल खडा गरिनु, कैयौँ रोपनी जग्गा काठमाडौंमा देखिनुले के कुराको पुष्टि गर्छ भने नेकपाको उच्च नेतृत्व धेरै पहिलेदेखि नै घरजग्गा कारोबारमा संलग्न छ र त्यसबाट त्यो समूहले धेरै फाइदा लिइसकेको छ ।
नेकपाका नेताहरूले काठमाडौंमा जग्गा हात पार्ने, जग्गा कारोबार गर्ने र त्यही पेशाबाट घर बनाउने, आफ्नो आर्थिक हैसियत उकास्ने, छोराछोरी विदेश पठाउने गर्दै आएका थिए । त्यसको उच्च स्वरूप बालुवाटार काण्ड हो ।
उम्लेर पोखियो भूमाफियाको गिरोह
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भूमाफियाको गिरोहमा फस्दै गएको देखिएको छ । नेपालमा जग्गाको कारोबार वैधानिक ढंगले हुने गर्दैन । रियल स्टेट कम्पनीहरू दर्ता गरेर, राज्यलाई कर तिरेर, जग्गाको उचित मूल्यांकन गरेर घरजग्गाको कारोबार हुने गर्दैन ।
नेकपा नेताहरूले जति पनि जग्गाको कारोबार गर्दै आएका छन्, ती सबैजसो विवादमा परे । यसुको मतलब उनीहरूले जानेर या नजानेर अवैधानिक ढंगले जग्गा कारोबार गर्दै आएका छन् ।
कुनै जग्गा १ करोडमा वास्तविक कारोबार गरिएको छ भने मालपोतमा २० लाखको कारोबार देखाइन्छ र त्यही २० लाखको कर तिरिन्छ । बाँकी ८० लाख रुपैयाँको कर छल्ने गरिन्छ ।
बालुवाटार प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली संघले किनेको करिब ३ रोपनी जग्गाको झण्डै ५० लाख कर मन्त्रिपरिषद्बाटै छुट गराइएको थियो । गैरआवासीय नेपाली संघ धनाढ्यहरूको संस्था हो । त्यति धनाढ्यहरूको संस्थालाई किन ५० लाख छुट दिइयो ? यो बडो रहस्यपूर्ण छ ।
राजनीतिक आड लिएपछि देशमा जस्तासुकै गैरकानुनी र अपराधजन्य कामहरू पनि सम्पन्न हुने गरेको पछिल्लो प्रमाण बालुवाटार प्रकरण हो । नेकपाको नेतृत्व तहले दशकौँदेखि अवैधानिक ढंगले घरजग्गाको कारोबार गरिरहेको छ ।
अति गरे खति हुन्छ भनेजस्तै अहिले बालुवाटार काण्ड उम्लेर पोखिएको मात्रै हो । पोखिन बाँकी भूमाफियाहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कति छन्, त्यो पनि विस्तारै खुल्दै जानेछ ।
साँचो कुरा सार्वजनिक गरियोस्
एउटै प्रकृतिको मुद्दामा कसैविरुद्ध मुद्दा चलाइनु र कसैलाई चोख्याइनुले सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले नीतिगत निर्णय मात्रै गरेको भन्दै माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अख्तियारले सफाइ दिएको छ । एउटै निर्णय गर्दा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरू जेल जानुपर्ने तर प्रधानमन्त्रीहरूचाहिँ फुक्काफाल हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु अख्तियारको इतिहासकै विरोधाभाषपूर्ण दृश्य हो ।
नेकपा सचिवालय बालुवाटार काण्डसम्बन्धी कुनै पनि सूचनाबाट बाहिर छैन । कृष्णबहादुर महरा रोशनी शाहीको कोठामा गएको पुष्टि भएपछि नेकपा सचिवालयले क्षणभरमै सभामुख र सांसदबाट राजीनामा दिन लगायो । तर माधवकुमार नेपाल र विष्णु पौडेल अर्बौंको घोटालामा सामेल हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा हाल्ने काममा रोक लगाइएको छ ।
मुद्दा फैसला गर्ने काम अदालतको हो, तर अख्तियारलाई मुद्दा लगाउनबाट किन रोक लगाइयो ? यो विषय नेकपाका लागि निकै महँगो पर्नेछ ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय गच्छदारले आफूलाई मुद्दा नलगाउन केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, सुवास नेम्वाङ र शेरबहादुर देउवासँग धेरै पटक दौडधुप गरेको कुरा सोमबारको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा बताएका छन् ।
नेकपा नेतृत्वले जसरी माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र विष्णु पौडेलको संलग्नतामाथि पर्दा हाल्ने काम गरेको छ, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई समेत बदनियतपूर्ण ढंगबाट चोख्याइएको छ ।
नेपाली जनतालाई ढाँटे पनि माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, विष्णु पौडेल वा लीलामणि पौडेलले आफूलाई ढाँट्न सक्दैनन् । सानो मेहनतले बालुवाटार व्यक्तिको कब्जामा पुगेको छैन ।
निरन्तर आइरहेका समाचारहरूलाई केलाउँदा के प्रष्ट हुन्छ भने बालुवाटारका बारेमा बुनिएको जालो धेरै बलियो थियो । कानुनले गर्नुपर्ने काम मन्त्रिपरिषद्बाट बदनियतपूर्ण ढंगले गरिएको थियो ।
सरकारीदेखि खेतीयोग्य जमिन सखाप
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले धेरै सरकारी जग्गालाई गैरकानुनी ढंगले स्वार्थसमूहलाई भाडामा लगाउने काम गरेको छ । त्यसले राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पुगेको छ ।
यती समूहलाई ताप्लेजुङ र काठमाडौंमा दिइएको जग्गा भाडाको निर्णय शंकास्पद र गम्भीर प्रकृतिका छन् । जग्गाबाट प्राप्त हुने कमिसनका लागि जस्तासुकै राष्ट्रघाती निर्णयहरू हुनु निकै दुःखद कुरा हो ।
अर्कातिर निजी जग्गालाई गैरकानुनी ढंगले प्लटिङ गरेर खेतीयोग्य जमिनलाई सखाप पार्ने कामलाई तीव्र पारिएको छ । जग्गाको वर्गीकरण गरिएको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । प्रत्येक शहरमा अधिकांश जग्गा दलालहरू नेकपाकै नेता कार्यकर्ता छन् ।
नेकपाका अधिकांश नेता कार्यकर्ताले जग्गा दलाली र ठेक्कापट्टालाई मुख्य पेशा बनाएका छन् । आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता त्यही पेशामा समर्पित भएको पार्टीको सरकारले जग्गा दलालीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियत राखेको छैन ।
कानुनहरू निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस्
घरजग्गाको लगभग सबैजसो कारोबारहरू न्यून मूल्यमा हुने गर्दछन् । व्यक्ति व्यक्तिले दलालीमार्फत कारोबार गरिरहेका छन् । कुनै रियल इस्टेट कम्पनीहरूले कारोबार गर्ने गरेका छैनन् ।
राज्यलाई कर तिरिएको छैन । नेकपा नेता कार्यकर्ताहरूले नै घरजग्गा कारोबारबाट राज्यलाई अर्बौं कर छली गरेका छन् । यसरी राज्यलाई कर छलेर गरिने व्यवसायमा संलग्न हुनु कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि दुःखको कुरा हो ।
घरजग्गा व्यवसाय यति भद्रगोल हुँदाहुँदै बलियो कानुन बनाएर कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ? नेकपाको सरकारलाई यो कुरा सोच्ने फुर्सद नै छैन । तिनीहरू अवैधानिक रूपबाट जसरी आर्जन गरिरहेका छन्, आफ्नो जिन्दगीभर त्यसरी नै कारोबार गर्न चाहन्छन् ।
घरजग्गा कारोबारलाई वैधानिक बनाउनेबित्तिकै नेकपाका धेरै नेताहरूको ढुकुटीमा ठूलो असर पर्नेछ । शायद त्यसैले तिनीहरूले कानुनको निर्माणमा कुनै ध्यान दिएका छैनन् ।
देशलाई सखाप पार्ने कार्यमा संलग्नहरूलाई कडा कारबाही र कानुनहरूको निर्माण गरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिवहरूलाई घरजग्गाको व्यापारिक कारोबारमा पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २८, २०७६, ०१:१३:००
स्वास्थ्यविद् भन्छन्ः गाउँमा कोरोना पुगेको छैन, रुँघाखोकी लाग्दैमा नआत्तिनू